Inqubomgomo ye-Airbnb Yokushiwo Abanye - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Inqubomgomo ye-Airbnb Yokushiwo Abanye
Ukuze sakhe inkundla yokwethembana, sicela umphakathi wethu ukuba uqiniseke ukuthi ukuphawula ku-Airbnb kuwusizo, kunemininingwane edingekayo, futhi akubeki umphakathi wethu engozini. Ngakho, silindele ukuba konke ukuphawula kuhambisane nalokhu okulandelayo:
1. Ukuphawula akufanele kwephule inqubomgomo yethu yokuphakathi
Okunye okuphakathi akuvunyelwe nhlobo ku-Airbnb. Ungabuyekeza Inqubomgomo Yokuphakathi ye-Airbnb ukuze uthole okwengeziwe.
2. Ukuphawula akufanele kubonise ukukhetha
Ukuphawula kuwusizo kakhulu uma kunikeza imininingwane engakhethi newusizo. Ngakho, asibavumeli abantu noma izinhlangano ezingabanikazi noma ezihlobene nendlu noma okokuzithokozisa ukuba ziphoste ukuphawula kwamabhizinisi zazo. Asibavumeli nabantu abaqinisekisiwe ukuthi bahlinzeka ngezindlu noma okokuzithokozisa okusemqhudelwaneni ukuba baphoste ukuphawula ngalabo abancintisana nabo.
Awuvunyelwe ukukhuthaza ukuphawula okuhle, ukusebenzisa izinsongo zokuphawula okungekuhle ukuze uzame ukuthola umphumela owufunayo, noma ukhuthaze othile ukuba aphawule ngendlela ethile bese umthembisa isinxephezelo.
Awuvunyelwe futhi ukwamukela ukubhukha komgunyathi ukuze uthole ukuphawula okuhle, usebenzise i-akhawunti yesibili ukuze uzibhalele ukuphawula, noma uxhumane nophathina bebhizinisi ukuze uthole ukuphawula okuhle.
Ngaphezu kwalokho, ukuphawula kungase kukhishwe enkundleni lapho kuye kwaba nokuhlala okuye kwephula ngezinga elikhulu Inqubomgomo Yamaphathi Nemicimbi. Lokhu kwenzelwa ukusiza ababungazi bazizwe bekhululekile ukungenela uma kuba khona iphathi eyisiphazamiso, ngaphandle kokwesaba ukuphawula okungekuhle ngenxa yalokho.
3. Ukuphawula kufanele kube okudingekile
Gcina ukuphawula kwakho kuhlobene ne-Airbnb nokuhlala kwakho noma okokuzithokozisa, ngoba izivakashi zifunda ukuphawula kwakho ukuze zifunde ngombungazi nendlu yakhe. Ukuphawula okungenasidingo kungaphazamisa futhi akuzisizi ezinye izivakashi zenze izinqumo ezihlakaniphile zokubhukha. Ngenxa yalesi sizathu, ukuphawula kufanele kugxile ekuxhumaneni kwakho namanye amalungu omphakathi nesikhathi sakho phakathi nokuhlala noma okokuzithokozisa.
Ukuze kugcinwe ukuphawula kudingekile, situsa ukugwema okulandelayo:
Ukuphawula ngemibono yomuntu yezenhlalo, ezepolitiki, noma ezenkolo
Inhlamba, ukubiza omunye ngamagama, nokuqagela ngesimo noma ubuntu bomuntu
Okuqukethwe okubhekisela ezimweni omunye angeke nhlobo akwazi ukuzilawula
Okuqukethwe mayelana namasevisi angahlobani ne-Airbnb (ngokwesibonelo, indiza, orisho, izitolo zokudlela, njll.)
Ukuphawula ngokubhukha okudlule kwe-Airbnb, ababungazi, noma izivakashi, noma mayelana nomkhiqizo we-Airbnb lapho ungahlobani nendlu, umbungazi noma isivakashi onika isilinganiso kuso
Uma sithola umbiko wokubuyekeza owephula le nqubomgomo, singase sikukhiphe lokho kuphawula enkundleni yethu. Ukwephula inqubomgomo ngokuphindaphindiwe kungaholela ekumisweni okwesikhashana noma ukuvalwa unomphela kwama-akhawunti alokho kuphawula.
Ukubika ukuphawula okwephula inqubomgomo yethu
Ukuze ubike ukuphawula okwephula inqubomgomo yokuphawula ye-Airbnb, thintana nathi.
Uma unomuzwa wokuthi ukuphawula akulona iqiniso
Nakuba sikhuthaza futhi silindele wonke amalungu omphakathi ukuba aphoste ukuphawula okuqukethe imininingwane ewusizo nenembile, i-Airbnb ayahluleli izikhalazo ngokuqondene nokuba iqiniso kokuphawula. Silindele ukuba lowo obhala ukuphawula akumele okuqukethwe ekuphawuleni kwakhe. Uma ufuna ukuphendula ekuphawuleni, thola ukuthi kanjani.
Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe yendlela esenza ngayo uphenyo futhi esihlaziya ngayo izikhalazo zokuphawula, funda okuthi Ukuhlaziya Izikhalazo Zokuphawula ze-Airbnb.